Home Wararka Gudaha Shiinaha: Boqorkii caanka ahaa ee markii dambe noqday shaqaalaha beeraha
Shiinaha: Boqorkii caanka ahaa ee markii dambe noqday shaqaalaha beeraha
Si kastoo ay ahaataba, sheekadiisu waxa ay noqonaysay mid aan caadi aheyn oo taariikhda gasha, waayo waxa uu nasiib u yeeshay oo u qornayd inuu xukumo afar meelood meel ka mid ah dadka caalamka ku nool.
Laakiin qisadiisu waxay ku dhamaatay si gaar ah, sababtoo ah si ka duwan awoowayaashiis, waxay boqortooyadiisu bilaabatey qarnigii 20-aad, waxeyna la kulantay cawaaqib xumo.Aisin-Gioro Puyi, waxa uu ku dhashay magaalada Beijing bishii Febraayo ee sanadkii 1906-dii, xilligaas oo adeerkiis Guangxu uu ahaa Boqorka Shiinaha.
Laakiin adeerkiis wuxuu markaas xabsi kusii jiray siddeed sano kaddib markii ay xirtay eeddadiis, Empress Dowager Cixi, oo ahayd isla qofkii isaga u dooratay inuu noqdo boqorka.
Iyada lafteedu waxay amartey 13-kii bishii November, 1908-dii, in boqorkii baddalay Guangxu, oo markaas dhimanayay, la keeno magaalada mamnuuca aheyd, oo ah deegaanka rasmiga ah ee boqorrada iyo golaha garsoorka, iyo sidoo kale xarunta xafladaha siyaasadda ee dowladda Shiinaha.
Boqorka la doortey inuu baddalo wuxuu ahaa Puyi, inkastoo ay dadiisa yaraydna, waligiis ma iloobin inuu la kulmo boqorka weyn ee Cixi-ga, kaasoo “wejigiisa cabsida iyo argagaxa lahaa” uu ka arkay daaha, isagoo ay ku hareereysnaayeen dad uusan wada aqoonin.
14-kii November, Guangxu ayaa dhintay, maalintii xigtayna waxaa dhintay Cixi. 2-dii bishii December, oo ahayd labo bilood kaddib markii la xusay sanad guurada saddexaad ee dhalashadiisa, dadka waxay bilaabeen in ay Puyi ugu yeeraan “darajadiisa boqornimada”. Magacyada kale ee ay ugu yeerayeen waxaa ka mid ahaa: “Sayidka toban kun oo sano”, “Wiilka jannada”, kadib waxaa dhacday xafladda Boqortooyada weyn.
“Waxay ahayd xaflad aan ku burburiyay ilinteyda”, ayuu goor dambe ku yiri buugga taariikh nololeedkiisa.
Waxa uu sidaas ku noqday boqortkii 12-aad ee boqortooyada Qing, iyo kii ugu da’da yaraa taariikhda dheer ee Shiinaha.
Markaas kaddib Shiinaha ayaa labojibbaar ka dhigay dhulkiisa, waxaana meelaha uu ku fiday ka mid ahaa gobolka Xinjiang ee ku yaalla galbeedka fog iyo sidoo kale dhulkii ay lahaayeen Mangooliyiinta iyo Tibet-ka, halkaasna waxaa ku dhismay waxa maanta loo yaqaanno Dhul Waynaha Shiinaha.
Boqortooyadii cusbayd waxay u dul qaadatay kala duwanaanshihii dadka iyo diimahooda, waxayna aqbashay dhaqamada kala duwan ee qowmiyadaha hoos imaanayay.
Markii lasoo gaaray qarnigii 18-aad, waxaa la sheegaa in Shiinaha uu ahaa waddanka ugu dhaqaalaha badnaa caalamka oo dhan.
Boqorrada isku baddalayay xukunka waxay ku noolaan jireen magaalada Beijing ee haddaba caasimadda u ah Shiinaha casriga ah.
Balse qarnigii 19-aad, boqortooyadii Qing waxay billowday inay daciifto, waxayna awood u yeelan wayday inay Shiinaha ka difaacdo howlgalladii militeri ee ay wadeen ciidamadii British American, Faransiiska, Jarmalka iyo Japan.
Sanadkii 1850-kii, Nin Shiineys ah oo masiixi noqday, oo la oran jiray Hong Xiuquan, ayaa ku dhawaaqay inuu yahay hoggaamiyaha cusub ee dalkaas, isaga iyo taageerayaashiisana waxay bilaabeen inay kacdoon ku sameeyaan boqortooyada Qing
Farshaxan la sameeyay qarnigii 19-aad oo muujinaya kacdoonkii lagu qabsaday Shiinaha
Dagaakii sokeeye ee markaas bilowday waxa uu socday 14 sano, waxaana ku dhintay qiyaastii 20 milyan oo ruux. Dagaalka waxa uu u dhaxeeyay ciidamadii Shiinaha iyo xoogagga ay taageerayeen dalalka reer Yurub.
1900 markii lasoo gaaray waxay ciidankii Shiinaha la dagaallamayay hareereeyeen magaalada Beijing, sanadkii xigay ee 1901-diina way soo afjareen dagaalkii.
Marka ay sidaas dhacaysay Shiinaha waxaa boqor ka ahaa Puyi oo yar, waxaana maamulka wakiil uga ahaa xubnaha kale ee qoyskiisa.
12-kii bishii February ee sanadkii 1912-kii, boqortooyadii wiilka yar waxay ku burburtay dagaalladii lagu hayay, waxaana gaanta lagu dhigay madaxdii qasriga oo dhan.
Halkaas ayuu kusoo idlaaday xukunkii boqortooyada Qing oo soo jiray muddo 267 sano ah. Puyi markaas da’diisu waxay ahayd 6 sano.
Shiinaha ayaa ka gudbay maamulkii boqortooyada ee soo socday ku dhawaad 2,000 oo sano, waxaana markaas laga fakarayay sida loo abuurayo maamul cusub oo aan boqortooyo ku dhisnayn.
Xubnihii boqortooyada la afgambiyay ayaa ugu dambayn xabsi la dhigay.
Puyi oo wiil yar ahaa waxaa loo oggolaaday inuu ku dhex noolaado qasrigiisii beeraha quruxda badan lahaa. Xitaa laguma wargelinin in boqortooyadiisa ay burburtay, waxa uuna u noolaa sida uu wali boqor yahay, sida uu ku xusay buugga taariikh nololeedkiisa.
Sanadkii 1917-kii ayaa mar si kooban xukunkiisa loo soo celiyay, kaddib markii xoogag daacad u ahaa boqortooyada ay afgambi ku rideen dowladdii jirtay dibna u yagleeleen “maamulka boqortooyada”.
Hase yeeshee nidaamkaas waxa uu cagaha ku taagnaa labo isbuuc oo keliya, Puyi iyo dadkii ku dhawaana lagulama xisaabtamin waxa dhacay.
Wiilka yar waxaa lagu celiyay qasrigiisa, waxaana loo shaqaaleeyay adeegto u samaysa wax walba oo uu rabo.
Waxaa la sheegaa in uusan wax cadaadis ah la kulmi jirin, xitaa marka uu sameeyo wax khalad ah.
Sanadkii 1919-kii, macallin guriga wax ku bari jiray oo British ahaa ayaa hab dhaqankiisa uga sheekeeyay maamulkii Ingiriiska.
Waxa uu ku tilmaamay: “Wiil aad u bani’aadannimo fiican, nolol wanaagsan, caqli badan, bashaashna ah”.
Sidoo kale waxa uu ku tilmaamay “wiil dabeecad qurux badan leh oo xor ka ah kibirka”.
Markii uu dhowr iyo toban jir noqday, Puyi waxa uu bilaabay inuu bannaanka uga soo baxo magaalada Mamnuuca ah, isagoo xiran jiray Okiyaale madow, iskana xiiray timaha dheer ee uu dhaqanka soo jireenka ah u lahaa.
“Waxaan guursaday ilaa afar xaas, balse runtii ma aysan wada ahayn xaasas dhab ah oo waxay ahaayeen oo keliya kuwo magac u yaal ah,” ayuu ku qoray taariikh nololeedkiisa.
Xilligaas waddanku weli go’aan kama uusan gaarin wixii laga yeeli lahaa hannaanka maamulka ee ka dambeeyay boqortooyada.
Sanadkii 1924-kii, hoggaamiye kooxeed dagaal ooge ahaa, oo lagu magacaabi jiray Feng Yuxiang, ayaa qabsaday xukunka, waxa uuna Puyi iyo adeegayaashiisii ka eryay magaalada Mamnuuca ah.
Mar kale ayuu boqor noqday
Puyi oo markaas 19 jir ahaa ayaa isagoo magangalyo doon ah isu dhiibay Japan. Markii ay ciidamadii Japan qabsadeen gobolka Manchuria ee Shiinaha, waxay ka abuureen boqortooyo uu boqor ka noqday Puyi.
Laakiin Puyi waxa uu ahaa boqor maqaar saar ah oo ay Japan gacanta ku haysay.
Markii uu socday Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Puyi waxa uu ku adkaystay inuu ka barbar dagaallamo Japan oo ahayd dowladdii xukunkiisa uu hoos imaanayay.
Marar badan ayuu soo saaray bayaanno uu ku taageersanaa Japan, sidaas awgeedna, sida uu isaga qudhiisaba qirtay, ma jirin cid kale oo xulafo la noqon lahayd ayuu iyaga kasoo baxsan lahaa.
Hase yeeshee inuu cararo ayuu ku khasbanaaday 11-kii bishii August ee sanadkii 1945-kii, kaddib markii uu ogaaday in Japan ay ku guul darraysatay Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Waxa uu raacay Tareen, horayna waxa uu usii qaatay hantidii boqortooyadiisa Qing iyo dadkii ku dhawaaba.
Isagoo damacsan inuu diyaarad ku aado Japan ayay gacanta ku dhigeen ciidamadii Soviet-ka Ruushka ee loo yaqaanay “Red Army”.
Askarta Ruushka oo markii hore aan aqoonsanin boqorka waxay u qaadeen magaalada Chita ee waddanka Serbia.
Intii uu xabsiga ku jiray waxaa la siinayay qaddarin gaar ah, waxa uuna ka duwanaa maxaabiistii kale.
Ku noqoshadii dalkiisa
40 sano oo ay dagaallo socdeen kaddib, Shiinaha waxa uu noqday nabad.
Puyi oo ka mid ahaa boqorradii soo maray wadankan oo marxalado kala duwan soo wajahay, waxa uu go’aansaday inuu dalkiisa dib ugu laabto. Waddo kale uma furnayd haddii uu xitaa rabi lahaa meel kale.
Waxa uu ka baqayay mustaqbalka ku sugaya halkaas
Markii uu tagay waddankiisa waxaa la geeyay xabsi uu ku qaatay sannado kale.
1960-kii, maamulkii Shiinaha xukunkiisa hayay ayaa boqorkii hore u oggolaaday in la siiyo dhalashada Shiinaha, xabsigana waa laga sii daayay.
Ninkan oo mar ahaan jiray boqorka waddanka ugu shacabka badan caalamka ayaa ku khasbanaaday in uu shaqooyin caadi ah ka raadsado magaalada.
Beer ku taallay magaalada Beijing ayuu ka helay shaqo. Waxaa loo shaqaaleeyay in uu beerta dhirteeda simo, qashinkana ka nadiifiyo. Laga billaabo 1964-kii shaqadiisa taas ayay ahayd.
Waxaase uu ku qanacsanaa natiijada ay noqoloshiisa yeelatay.
“Waan necbahay qaybtii hore ee nolosheyda, sababtoo ah waxay ahayd mid aan kusoo arkay bahdilaad badan,” ayuu yiri.
Previous articleSamrat Prithviraj: 3 sabab oo keenay guul darrada filimkii la sugayay ee Akshay Kumar
Next articleWareysi:- Guddoomiyaha Xisbiga Wadani oo Sheegay in Gurigiisa la Weeraray
Ergeyga Madaxweynaha oo wadahadal muhiim ah la yeeshay Ms. Gwen Hines
Maamulka Tigray oo Xabsiga u Taxaabay Wariyaal katirsan TV-ga Tigray.
DFS oo Bangiga Adduunka & IMF kala hadashay bilaabida lacagihii laga...